Miyuu PC-ga u dhimanayaa dadka isticmaala CAD / GIS? - Gofumed
Oktoobar, 2010 Cartografia, Geospatial - GIS, Internet iyo Blogs
Maaddaama ay nagu kharashgareyneyso inaan sawir ka qaadno miiska sawirrada ... Miyay kartuuniyiintu ku khasbanaanayaan inay ku noqdaan booskaas?
Mawduuca waxaa laga wada hadlayaa heer guud, mana aha khalad. Waan hubaa inaan ku jirno si aan u aragno kombuyuutarada macaamiisha sida boostada boostada daabacan; kaliya ujrooyinka gaarka ah. Magazine PC bishan qalabka culus ee farsamada-sigaarcoobka ah ee mawduuca, inkasta oo xariiqeeda ugu weyn ay diiradda saartaa siyaabo 45 ah twit hindhiso kasta.
Nasiib darro, ha ahaato farqiga kale badan, Carlos Mendoza. Haddii aan ogaan lahaa, waxaan u direy fariin loogu talagalay tolida si sharaf leh oo ku saabsan mawduuc kasta oo Lennon ah, gees kasta oo ka mid ah jibbaarada inta lagu jiro muddadaydii oo aan la socdey bicentennial.
Laakiin marka la eego caalamka sawir-qaadaha maahan khasab in sidaas dhacdo. Si aad u rumaysatid in PC-ga caadiga ah uu dhiman doono waa in uu kala saaro isticmaalka macluumaadka iyo wax soo saarka. Ama sida saaxiibka aargoosiga ah ee Canary Islands ayaa dhihi lahaa, calanka kobcinta kobcinta ama ku dhexjiraan dhexe.
Macaamiisha ayaa u dhinta macaamiisha macluumaadka
Hadda waxaa suurtogal ah in xogta laga helo qalab kala duwan, waa qashin xitaa ka sameysa iyada oo aan wax dhib ah -laakiin waa sax- Meelaha laga galo studio, xitaa ka soo jeeda qoob ka ciyaarka la Wii halka carruurta ay ku mashquulsan yihiin TV-ga. Noqo madadaalo, si aad u caawiso naanaysta howlaha seyniska bulshada, si aad u aragto emailka ama tirakoobka blogga; Hal farta ayaa ku filan.
Iyo deegaankeena CAD / GIS, adeegsigu uma baahna wax ka badan Acer Aspire si uu u furo, u daabaco, u diro sarkaalka (dhatashow), la tasho ama casriyeeyn adoo adeegsanaya Khariidadda Bentley ama gvSIG. In garoonka, Mobile Mapper 6 ku rakibi karaa CartoPad iyada oo tanna la sameeynaayo kadibna dib ugu noqo golaha wasiirrada. Sidoo kale TV-ga, qofna kuma laha liisanka ama barnaamij khaas ah, kaliya qalab si uu u arko, iyada oo kala duwanaanshaha isdhexgalka.
Haa. Isticmaalka xogta ma qaadaneyso GPU, sababtoo ah ku dhawaad ​​dhammaan sayniska shaqadani waxay ku jirtaa xogta (la soo saaray) iyo dhexgalka yar yar ee iyaga la leh. Noqo shaati-yaamyada, kor-u-kaca ee saldhigga ama saldhiga maskaxda xarruumaha dhijitaalka ah.
Ma u dhimanayaan soo saareyaasha
Laakiin userka ka shaqeeya fiidiyowga fiidiyowga, sawirka CAD ama barnaamijka GIS ayaa hubaal ah inuusan awood u lahayn in uu u tago booskiisa caadiga ah ee kormeeraha, taas oo kaliya u noqotey mid sharaf leh, ballaaran oo aan waxyeello u lahayn indhaha. Ma ahan xogta, laakiin hababka ay tahay meesha ganacsigaagu yahay, iyo raaxadaas looma qaadanno daryeelka.
Waxay u badan tahay in naqshadeeyaha garaafka ahi uu dareemo raaxo leh qalin gacmeed oo gacanta ah, da'da shaashadda Wacom. Laakiin waxaan ka shakisanahay inaan mar kale ku tiirsanaan karno mashiinka miiska, sidaas darteed way adagtahay in isaga laga baxo oo laga dhaadhiciyo in uu iska tuuro taliyaha barbardhacaha iyo qalabka isbeddelaya.
Waxaan kuwo Rumeeyey qalabka dhexgalka iyo bedesho kaydinta maxalliga ah, sida disk adag iyo mouse xayawaan qiroweyn huriye waa a sano 20 suugaan leh laba badhamada hoos hore, Wuxuu si tartiib tartiib ah kubbeddelay kubadiisa lugihiisa si iftiin dhalaalaya oo ka yimaada makaanka afkiisa. alaabta lagu ciyaaro, kuwa loo horumariyo karaa waddo 3D iyo daaha guri keeni kara-waqtiga dhabta ah photogrammetry ilaa hadda loo yaqaan daydo 3D, laakiin sii Wakiilada 2D. Iyo macaamilka, waqtiga qaybta ayaa ku dari doona si aan u shaqeyno cabbirka 4, sida adduunka dhabta ah.
Laakiin illaa iyo intii uu ka shaqeynayo xarun dhoofin ah oo la gashan karo fosil Juquraafi illaa iyo nadiifinta nadiifka ah ee Pyton, waxay u baahan doonaan koox awood u leh inay naga dhigto kalsooni ah in aan soo saarno wax cusub. Sidoo kale TV-ga, isticmaalka wuxuu noqon doonaa iftiin, laakiin wax soo saarku wuxuu ahaan doonaa farshaxan caadi ah. Hababka, ma aha xogta. Sidaas awgeed xafiiska kartootiga wakhti dheer ayaa weli lahaan doona madax ka socda qalab iftiin leh, oo leh kumbiyuutar iyo kormeer ah oo ku dheggan raajada; si loo kormeero hababka maalmaha mashquulka ah iyo hayntooda ay u socdaan.
Hase yeeshee, qubarada, marwalba waxay jiri doonaan shan carruur ah oo booska marsup ku shaqeynaya kombuyuutar si ay u sameeyaan khadad laysarka wax-qabadka waqtiga dhabta ah.
Iyo inaan raacno Carlos, waa inaan sugnaa isaga inuu dib ugu soo laabto booska uurjiifka ah. Haddii aad dillaacdo!
Post Previous«Previous Magazine INPOSITION
Post Next Indho at gvSIG 1.10Next »
2 Jawaab "PC-yada miyuu u dhimanayaa dadka isticmaala CAD / GIS?"
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay Waa run in shabakadaha bulshada, fariimaha deg degga ah, sawirada, iwm ay sii kordhayaan la heli karo. Si kastaba ha noqotee, iyo xaaladdayda, uma beddelo "raaxada" iyo "nabadda maskaxda" ee la shaqeysa WorkStation soo saarta, inkasta oo hadda aan higsaneyno inaan GIS dhulka ku haysanno PC Tablet PC iyo walxaha.
Laakiin maadaama aan u baahanahay in aan wax ka beddelo oo wax ka qabto, PDA, telefoonka gacanta ama laptop ma dhaafo xumadayda. Iyo kuwaan, inkastoo ay da'doodu tahay (5 sano hal iyo 2 kale), weli waxaan ku kalsoonahay shaqadeyda ugu adag.
Qalbi iyo farxad mar kale inaad mar kale ku akhrido.